नेपाल आज | करिश्मा भन्छिन्, ‘लोकमानको कुरा के हो थाहा छैन’ (भिडियोसहित)
करिश्मा भन्छिन्, ‘लोकमानको कुरा के हो थाहा छैन’ (भिडियोसहित)
सोमबार, ०८ कार्तिक २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
‘करिश्मा मानन्धर’ नेपाली समाजकालागि यो नाम नै काफी छ । उनका बारे धेरै भनिरहनै पर्दैन । समकालीन धेरै नायिकाहरु अहिले गुमनाम छन् । यी नायिका भने अहिले पनि ‘हट केक’ जस्ती । अभिनय, फिल्म निर्माण र सौन्दर्यका कारण करिश्माको करिश्मा नेपाली रजतपटमा उस्तै छ । यो सफलता, चर्चालाई राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ उनलाई थाहा छैन । तर करिश्मा अहिले फोहोरी खेल भनिने राजनीतिको परीक्षा दिइरहेकी छन् । उनले भनिन्, ‘अन्य क्षेत्रको परीक्षामा फेल भईनँ । राजनीति गाह्रो रैछ, तर पास हुन्छु ।’
जहाँ समस्या त्यहाँ सम्भावना
अधिकाशं युवाहरुले समस्याको पोको देखेको बेला करिश्मा मानन्धरले नेपालमा प्रशस्तै सम्भावना देखेको बताउँछिन् । नयाँ शक्ति नेपालमा प्रवेश गरेर नयाँ परिचय स्थापित गरेकी सदाबहार सुन्दरी नायिका करिश्मा अहिले राजनीतिको मैदानमा छिन् । खेल जित्न अभ्यास चाहिन्छ । राजनीतिको मैदानमा नयाँ खेलाडी करिश्माले हार्न नजानेको बताउँछिन् । त्यसलै उनी दैनिक नयाँ कुरा सिकिरहेकी छिन् । नयाँ मान्छेहरुको संगतमा उनले नेपालीहरुको बास्तविकताको धेरै नजिक पुगेको छिन । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा उनले यतिबेला बिल्कुल नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन् ।
अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिश्माको लागि फरक बन्यो । उनले दसैं पनि फरक तरिकाले मनाईन् । पहिले टीकाटालो, साथीभाइ भेटघाट, खानपिन आदिमा बित्ने गथ्र्यो । यो पटक राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी भएर दसैं बित्यो ।
करिश्माको जीवनशैली अहिले फेरिएको छ । आजकाल उनी नत प्रोडक्सन हाउस धाउँछिन । नत निर्माता निर्देशकहरुलाई नै भेट्छिन । उनको भेटघाट आजकाल राजनीति गर्नेहरुसँग बाक्लो छ । समाजका फरकफरक क्षेत्रका मानिसहरुसँग उनको सम्बन्ध जोडिएको छ ।
कहिले सुकुम्बासी बस्ती, कहिले सडक बालबालिकासँंग सरोकार राख्ने संघसस्थामा पुग्ने, सहयोग गर्ने, छलफल गर्ने काममा उनको धेरै समय खर्च हुन्छ । यसको अर्थ उनले चलचित्र चटक्कै छाडेकी भने छैनन् । चलचित्रबाट बिदा लिएँ पनि उनले भन्ने छैनन् । ‘सुहाउँदो भूमिकाका लागि अफर आयो भने काम गर्छु ।’ उनले भनिन् ।
परिवर्तन अपराध होइन
करिश्मा आफूलाई समयअनुसार चल्न जानेको बताउछिन । भन्छिन्, ‘परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो । त्यसैले समयअनुसार परिवर्तन आवश्यक छ । म परिवर्तन भएको हो, कुनै अपराध गरेको होईन । बजारमा सुनिएका अनैको टिक्काटिप्पणी परिवर्तन नचाहरुले फिजाएको भ्रम हो । यस्तोे टिक्काटिप्पणीले मलाई अगाडि बढ्न उर्जा दिन्छ । ’
‘समयले हिड्ने गोरेटोहरु आफै छुट्याउँछन । पहिले सेलिब्रेटी थिए अहिले जनताको चेलीबेटी भएको छु । पहिला चलचित्र क्षेत्रमा हुदा पनि समाजसेवा गरेकै थिएँ । अहिले जनताहरुको दुख सुख बुझ्दै राजनीतिबाट समाजसेवा गर्न आएको छु । क्षेत्र फरक भए पनि मेरो उद्देश्य समाजसेवा गर्ने हो । मेरो नियत सफा छ ।’
चुनौतीमा सम्भावना देख्छु
करिश्मालाई राम्रोसँंग थाहा छ अब उनको चाहनाले मात्रै केही हँुदैन । हिउँदमा पानी पर्दैन । चैतमा जाडो हुँदैन । त्यसैले उनले समयले दिएको परिवर्तन स्वीकार्ने हिम्मत राख्छिन । ‘चुनौतीमा सम्भावना देखेकै कारण अभिनेतृबाट नेतृ भएकी हुँ ।’ उनले भनिन् ‘राजनीति समाज परिवर्तन गर्ने अश्त्र हो ।’
राजनीति शुरु गरेयता करिश्मा नेता स्टाइलका कुराकानी गर्न जान्ने भएकी छिन् । पहिले कलाकारितासँग जोडिएकी थिइन् । अहिले समाजसँग । कलाकारिताले मनोरञ्जनसँग सकारात्मक सन्देश दिन्छ । तर यो अप्रत्यक्ष हुन्छ । राजनीतिले प्रत्यक्ष सन्देश दिन्छ । दुवै समाजसेवाका माध्यमहरु हुन् । राजनीतिले सोझै समाज सेवा गर्छ ।
राजनीतिः गाह्रो तर सम्भव
उनले नयाँ शक्ति नेपाल काम गर्न गाह्रो भएको महशुस गरेकी छिन । भन्छिन‘ म जुनसुकै पार्टीमा गएको भए पनि गाहे नै हुन्थ्यो । किनकी कलाकारिता गरेको मान्छेले राजनीतिको रणनीति बुझ्न गाहे हँुदो रैछ । तर, असल नियत भएको मान्छेको मुल्यांकन जनताले गर्छन । काम गरेर जनतालाई देखाउने भनेको पद पाए पछि हो । अहिले जनतासँंग नजिक हुने समय हो । ’
नयाँ शक्ति नेपालसँंग जोडिएको छोटो समयमा नै करिश्माले धेरै अनुभव बटुलिसकेकी छिन । पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन अधिकांश समय खर्चिने हुनाले सबै पार्टीले जनताको बारेमा सोच्न फुर्सद नभएको उनको अनुभव छ । भन्छिन ‘अन्य पार्टीजस्तै नयाँ शक्ति पनि यो रोगबाट अछुतो छैन । देशपछि पर्नुको मूल कारण नै पार्टीहरुको आन्तरिक कलह र अरुको खुट तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा हो । जे गर्न हिडेको हो त्यो गर्न छोडेर हामी धेरै आन्तरिक कुरामा विबाद गर्छौ । जसको कारण दलहरुलाई जनताले विश्वास गर्न छाड्छन् ।
पार्टीमा विबाद हुनु सामान्य
पार्टीभित्र विवाद हुनु सामान्य कुरा हो । विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु मिलेर पार्टी बनाउँछन् । त्यहाँ विचार र धारणाहरु फरक हुन्छन् । फरक फरक विचार भएका मानिसहरु एकठाउँमा आउँदा विवाद स्वभाविक हुन्छ । विवाद, फरक धारणा भएन भने त्यो पार्टी जीवन्त पनि हुन सक्दैन ।
‘विचारको घर्षणमा झिल्का निस्कन्छन् । त्यस्ता झिल्का पार्टीमा आउँछन् जान्छन् । हामी त्यसको हिसाब गर्न भन्दा जनताको बारेमा सोच्न समय दिन्छौ । व्याक्तिगत स्वार्थ भन्दा देशको स्वार्थलाई हरेर अघि बढ्छौं । विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । पार्टीमा बस्ने, जाने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । हामी विभेदको राजनीति गर्ने पक्षमा छैनौं । म पनि नियमित रुपमा बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो विचारहरु राखिरहेकी छु । ’
नयाँ शक्तिमा उनलाई त्यति ठूलो समस्या छैन । सबै क्षेत्रबाट आएका मानिसको जमघट हुने भएकाले कहिलेकाही समझदारीको कमी हुने उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन ‘ म ग्ल्यामर क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको मान्छे ,कोही कोही मानिसहरु यसले के नै गर्न सक्छे र ? भन्ने पनि छन । तर त्यो ठूलो समस्या होइन । किनकी संसारमा सबै जना सबै क्षेत्रमा दक्ष हुँदैनन् । त्यस्ता टिक्काटिप्पणीहरुबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु ।’
राजनीतिमा खरो उत्रन्छु
‘अहिले म कलाकार होइन राजनीतिज्ञ भएर आएकी हुँ । लगन, मेहनत, समर्पणले मानिसलाई सफल बनाउँछ । कलाकारिता म यस्तै कारणले सफल भएकी थिएँ । अब राजनीतिमा अर्को एक गुण ‘इमानदारीता’ थपेर राजनीतिमा समर्पित हुन्छु । सफल पनि हुन्छु ।
जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ । यो संसारबाट बिदा लिनु अघि आफ्नो मातृभूमिका लागि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । लिन होइन दिनका लागि राजनीतिमा आएको उनले बताइन । हाम्रो देश हरेक दृष्टिबाट सुन्दर छ । यो सुन्दर देशलाई कुरुप अरुले होइन हामी आफैले पारेका हौं । ‘हामी एकअर्कामा नमिल्नु कमजोरी हो । त्यही कमजोरीलाइ शक्तिमा बदल्ने हो भने देशमा परिवर्तन सम्भव छ । त्यो पनि हाम्रै पालामा । उनले भनिन ‘अब पनि हामी परिवर्तन नहुने हो भने देश यस्तै भइराख्नेछ ।’
लोकमानको कुरा के हो थाहा छैन
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो विषय जटिल छ भन्ने करिश्माको ठम्याई छ । लोकमान प्रकरणमा धेरै मानिसले धेरै खाले विचार, धारणा, जानकारी सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लोकमानको इतिहास पनि पुरानो छ । यसकारण लोकमानबारे सही के गलत के ? भन्ने कन्फ्यूजन सिर्जना भएको छ उनकालागि । उनले भनिन्, ‘कुरा के हो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ ।’
भारत र चीनबीचमा रहेकोले नेपालले सन्तुलित व्यवहार गर्दै विकासमा अगाडि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ । उनले आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताइन । ‘हामी आपसमा लड्छौं, त्यसैमा छिमेकीले फाइदा उठाउँछन् ।’ उनले भनिन् ।
राजनीति करिश्मा मानन्धर लोकमान नायिका